Isinyithi esenziwe ngombala Iglasi elaminethiweyo Ngaba uKhuseleko lunentambo lweglasi?
Metal enemingxuma iglasi elaminethiweyo luhlobo iglasi elaminethiweyo leyo igridi okanye ngqo ocoliweyo wocingo iglasi. Ngokusekwe kumgangatho wayo olungileyo wokumelana nomlilo, iglasi enentambo yaqalwa yasetyenziswa e-US, kwaye iyilelwe ukumelana nobushushu kunye nemijelo yethumbu. Oku kwenza iglasi enentambo okokuqala ...
Umahluko phakathi kweFlexible Metal Mesh facade kunye ne-Crimped Woven Wire Mesh Facades
Abathengi abaninzi babuza ngumahluko phakathi kokuguquguquka kwesinyithi se-Metal Mesh kunye ne-Crimped Woven Wire Mesh facade. Ngapha koko, ezi ndidi zimbini zetambo yocingo lwesinyithi ziyafana ngokwendlela yokusebenza. Ngokuqhelekileyo zisetyenziselwa ukubopha udonga lwangaphandle okanye ukuhombisa ngaphakathi ...
Izinto eziluncedo Zophahla lwetshiphu
Kunqunyanyisiwe isilingi umnatha wentsimbi, ekwabizwa ngokuba ngumhombiso wocingo wentsimbi (ucingo olukiweyo) lwenziwe ngentonga yesinyithi okanye intambo yesinyithi, enepatheni eyahlukileyo yelaphu ngaphezulu, isilingi sentsimbi sifumana ukusebenza kunye nokuhombisa. Ngokusekwe kwiindlela ezahlukeneyo zokuluka, isitayile semet yentsimbi ...